कसैलाई राहत आबस्यक परे सम्पर्क गर्न करिश्माको अनुरोध १ सेयर गर्नुहोस – Online Nepal
कसैलाई राहत आबस्यक परे सम्पर्क गर्न करिश्माको अनुरोध १ सेयर गर्नुहोस
April 25, 2020 613
अहिले एतिबेला कोरोना भाईरसको कारण ले नेपाल पुरै लकडाउन छ । मानिस हरु घर बाट बाहिर निस्कन सम्म पाएका छैनन । यो बेलामा काम गरेर एक छाक खाने मानिसहरुलाई गुजारा चलाउन धेरै नै गाह्रो भएको छ । यो बेला सरकारले राहत बितरण गरेको छ । तर पनि कतिपय ठाउँ भने पुगेको छैन । यो समयमा राहत बितरण गर्ने मानिस प्राय कम नै छन ।
सामाजिक संजालमा अहिले नायिका करिश्मा मानन्धरले आफ्नो घर वरिपरी डेरा गरी बस्ने र समस्या भएका मानिसहरुको लागि सहयोगको हात अगाडि बढाएकी छिन । उनले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै केही समस्या भएको खण्डमा गोदावरी भिलेज स्टूडियो अर्थात मानन्धर निवासमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेकी छिन । करिश्माको यो अनुरोध आएपछि केही मानिसहरु
उनको घरसम्म पनि पुगेका छन । करिश्माले केहीलाई सहयोग गर्न सकेको तर पूर्ण तयारी नगरिएकाले पनि केहीलाई फर्काउन परेको भन्दै भोली गरौला समेत भनेकी छिन । करिश्माले सबैलाई आफ्नो नजिकका परिवार, छिमेकीहरुलाई सहयोग गर्न पनि अपिल गरेकी छिन । उनले, कतिपय मानिसहरु उनको स्टाटस हेरेर सातदोबाटोबाट गोदावरीसम्म
हिडेर पुगेको पनि उल्लेख गरेकी छिन । नायिका करिश्मा मानन्धरले सामाजिक संजालमा केही नयाँ सुन्द तस्वीरहरु पनि पोष्ट गरेकी छिन । तस्वीर पोष्ट गर्दै उनले लेखेकी छिन, फोटो त हाल्न परिहाल्यो, नत्र बिर्सिएला । यो समाचार अनलाईन खबर डटकम मा लेखिएको छ । नायिका करिश्मा मानन्धरले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लामो समय बिताइसकेकी छिन ।
कुनै समय करिश्माको यूग थियो जतिबेला नेपालमा नायिका भनेकी करिश्मा हुन् भनेर दर्शकले सोच्थे । उनको सुन्दरता, अभिनयको चर्चा खुबै हुन्थ्यो । करिश्माको चलचित्र हेर्न दर्शकको भिड लाग्थ्यो । तर, अहिले समय बदलिएको छ । करिश्माको चर्चा अहिले पनि कम भएको छैन । तर, उनको चर्चा चलचित्रको व्यापार वा अभिनयका कारण भन्दा पनि अन्य कारणले हुने गर्दछ ।
करिश्मा चलचित्रमा भन्दा बढी सामाजिक संजालमा सक्रिय देखिन्छिन् । तर, आजको समयमा पनि करिश्मालाई आफ्नो प्रतिस्पर्धा अरु कोही छन् भन्ने लाग्दैन । सामाजिक संजालमा आफ्नो पुरानो तस्वीर पोष्ट गर्दै करिश्माले आफनो प्रतिस्पर्धा आफू नै भएको लेखेकी छिन ।
Prevबिदेशमा अलपत्र परेका नेपाली लाई खुसिको खबर। अब छिट्टै एयरपोर्ट खुल्दै। ।।तुरून्तै हेर्नुहोस्।।
Nextस्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी
श्रीमानसँग मिलेर यस्तो फिल्म बनाउँदै नायिका आँचल शर्मा
सुस्मिताकी आमाको आक्रोश के कारण फा#सिमा ल$ट्किन्छु भनिन।सरकारले हेर्नै पर्ने भिडियो
लहानमा चिकित्सकको लापरबाहीले २३ वर्षीया युवतिको मृ*त्यु,पोलिक्लिनि तनावग्रस्त
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45315)
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरुको लागी आयो यस्तो खबर ! (44765)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37960)
सपनामा नागदेवताको दर्शन पाउनु भयो भने ,यस्ता हुन्छन संकेतहरू……